Vakio ny soso-kevitry ny seminera ary aza avela hifehy ny ordinateranao!
Jason Adler, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny fanafihana bot no karazana heloka bevava faran'izay sarotra sy malaza amin'izao andro izao. Mamela ny hackers sy spammers izy ireo hifehezana ireo fitaovana elektronika ary hamadika azy ireo ho toy ny ordinatera zombie. Ny solosaina zombies dia manatanteraka karazan'asa maro samihafa ary miasa toy ny botnets matanjaka mahavita manamboatra karazana heloka bevava ety anaty aterineto, manaparitaka ny viriosy ary mamorona spam.
Inona no atao hoe Bot
Ny bots dia karazana malware izay mamela ny mpanafika mifehy sy manaparitaka ny ordinateranao na ny fitaovana findainao. Izy ireo koa dia antsoina hoe robot web ary anisan'ny tambajotra misy milina maro be. Ity tamba-tsarin'ny finday ity dia afaka mampiasa fitaovana an-jatony na fitaovana an-jatony an'arivony manerantany. Satria ny bôtô dia mifindra amin'ny ordinatera sy ny fitaovana finday, ny botmaster dia ao ambadik'ireny aretina ireny. Ireo mpikirakira cyber dia mikendry ny hanelingelina ny asanao an-tserasera ary mangalatra ny angon-drakitrao. Matetika izy ireo no antsoina hoe mpiompy mpiompy na mpiompy.
Ny sasany amin'ireo botnets dia mety manana fitaovana vitsy vitsy, fa ny iray kosa dia avy amina ampolony amin'ny solosaina an'arivony an'arivony izay azony. Samy hafa ny ordinatera isan-karazany, ary tsy maneho fiahiana ny mpiserasera, izay midika fa tsy misy dikany ny fiarovana azy ireo na tsia.
Ny bot na tarika iray (botnets fantatra amin'ny anarana hoe botnets) dia afaka mampihena ny ordinateranao na ny fitaovana findainao, asehoy ireo hafatra hafahafa sy hafahafa ary manapaha ny masonao tsy ho ela.
Ahoana no fiasan'ny Botnets?
Ny bots dia afaka mivezivezy amin'ny ordinateranao amin'ny fomba maro. Matetika izy ireo dia miparitaka amin'ny Internet amin'ny alalan'ny motera . Ny milina tsy misy otrikaretina, ny botnets sy ny bots dia mamela haingana ny milina maro ary mitatitra amin'ny tompony fa efa nahatratra ny tanjony izy ireo. Miezaka ny hijanona ao amin'ny ordinateran'ny solosainao izy ireo mandrapahafantaran'ny mpampianatra azy ireo hanatanteraka azy asa.
Fiarovana amin'ny Bots sy Botnets:
Mba hiarovana ny fitaovana ampiasainao amin'ny botnets na ny bots, dia tadidio ireto torohevitra manaraka ireto:
1. Mametraka rindrambaiko fiarovana tsara indrindra:
Tsara ny mametraka programa fiarovana na fitaovana toa an'i Norton Internet Security na Norton 360. Samy manana ny marina izy ireo ary azo itokisana, ary manam-pahaizana IT maro no manoro izany fitaovana izany noho ireo safidy sy karazam-boalohany tsara azony.)
2. Ampifanaraho ny fanovana mba hivoahana:
Manoro hevitra anao izahay mba hampifanaraka ny fanalahidin'ny rindrambaiko mba hanavaozanao azy. Hanamafisina ny fiarovana anao izany ary hahazoana antoka fa voaro taona maro aorian'ny taona ny mpampiasa anao sy ny tenimiafinao.
3. Ampitomboy ny sehatra fiarovana ao amin'ny tranokala:
Na mampiasa Firefox na Google Chrome ianao, dia tokony hampitombo ny safidinao eo amin'ny sehatra navigateur ianao ary tsy manindry ny mailaka ao ambadiky ny fanamafisana ny loharano. Indraindray, ny mpampiasa dia miantsena ireo tahirin-kevitra mampiahiahy ary ny rafitr'izy ireo dia tsy mahazo aina Source . Ankoatra izany, tsy tokony hanokatra tranokala olon-dehibe mihitsy ianao ary tsy tokony hanokatra ny dokam-barotra banner